5 Zvino Jehovha akataurazve naMosesi, achiti: 2 “Rayira vanakomana vaIsraeri kuti vabudise mumusasa vanhu vose vane maperembudzi+ nevanhu vose vane zvinoyerera+ nevanhu vose vakaitwa vasina kuchena nomweya wakafa.+ 3 Munofanira kuvabudisa, angava munhurume kana munhukadzi. Munofanira kuvabudisa kunze kwomusasa,+ kuti varege kusvibisa+ misasa yevaya vandigere pakati pavo.”+ 4 Vanakomana vaIsraeri vakaita saizvozvo, vakavabudisa kunze kwomusasa. Vanakomana vaIsraeri vakaita saizvozvo, sezvakanga zvaudzwa Mosesi naJehovha. 5 Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti: 6 “Taura nevanakomana vaIsraeri, uti, ‘Kana murume kana mukadzi akaita chimwe chezvivi zvinoitwa nevanhu nokuita chinhu chokusatendeka kuna Jehovha, mweya iwoyo watovawo nemhosva.+ 7 Vanofanira kureurura+ chivi chavo chavakaita, uye iye anofanira kuripa zvose zvinoenzanirana nemhosva yake, achiwedzerawo kwazviri chikamu chimwe chete pazvikamu zvishanu,+ anofanira kuzvipa waakatadzira. 8 Asi kana mumwe wacho asina hama yepedyo yokuti ipiwe zvinoenzanirana nemhosva yacho, zvinoenzanirana nemhosva yacho zviri kuripwa kuna Jehovha ndezvomupristi, kunze kwegondohwe rokuyananisa raachamuyananisira naro.+ 9 “‘Mipiro+ yose yezvinhu zvitsvene+ zvose zvevanakomana vaIsraeri, yavachauya nayo kumupristi, inofanira kuva yake.+ 10 Zvinhu zvitsvene zvomunhu mumwe nomumwe zvicharamba zviri zvake. Chero chipi zvacho chingapiwa mupristi nomunhu mumwe nomumwe, chichava chake.’” 11 Jehovha akataura naMosesi, achiti: 12 “Taura nevanakomana vaIsraeri, uti kwavari, ‘Kana mudzimai womurume upi zvake akatsauka zvokuti anomuitira chinhu chokusatendeka,+ 13 mumwe murume akarara naye, akabudisa urume,+ zvikavanzirwa murume wake,+ zvikaramba zvisingazivikanwi, iye mudzimai wacho akazvisvibisa asi pasina chapupu chinomupomera, iye akasabatwa; 14 murume wacho akabatwa negodo,+ akanyumwira kutendeka kwomudzimai wake, uye mudzimai wacho akazvisvibisa zvechokwadi, kana kuti murume wacho akabatwa negodo, akanyumwira kutendeka kwomudzimai wake, asi iye zvechokwadi asina kuzvisvibisa; 15 murume wacho ngaabve auya nomudzimai wake kumupristi,+ auye nechinopiwa chake pamwe chete naye, chegumi cheefa chefurawa yebhari. Haafaniri kudurura mafuta pamusoro payo kana kuisa zvinonhuhwirira+ zvichena pamusoro payo, nokuti icho chinhu chinopiwa chezviyo chegodo, chinopiwa chezviyo chechiyeuchidzo chinoyeuchidza kukanganisa. 16 “‘Zvino mupristi anofanira kuuya naye mberi, omumisa pamberi paJehovha.+ 17 Mupristi anofanira kutora mvura tsvene iri mumudziyo wevhu, uye mupristi anofanira kutora guruva rinenge riri pauriri hwetebhenekeri, oriisa mumvura yacho. 18 Mupristi anofanira kumisa mukadzi wacho pamberi paJehovha, osunungura bvudzi romusoro womukadzi wacho, oisa chinopiwa chezviyo chinoyeuchidza, icho chinopiwa chezviyo chegodo+ pazvanza zvake, uye muruoko rwomupristi munofanira kuva nemvura inovava inouyisa kutukwa.+ 19 “‘Mupristi anofanira kuita kuti apike, uye anofanira kuti kumukadzi wacho: “Kana pasina murume akarara newe uye kana usina kutsaukira kuzvinhu chero zvipi zvazvo zvisina kuchena iwe uchiri pasi pomurume wako,+ mvura iyi inovava inouyisa kutukwa ngairege kukukuvadza. 20 Asi iwe, kana wakatsauka uchiri pasi pomurume wako,+ kana wakazvisvibisa uye kana mumwe murume asiri murume wako akabudisira urume+ hwake mauri,—” 21 Zvino mupristi anofanira kuita kuti mukadzi wacho apike mhiko ine chokuita nokutukwa,+ uye mupristi anofanira kuti kumukadzi wacho: “Jehovha ngaaite kuti uve chinhu chinotukwa uye chinotaurirwa mhiko pakati pevanhu vokwako nokuita kwaJehovha kuti chidya+ chako chitetepe uye kuti dumbu rako rizvimbe. 22 Mvura iyi inouyisa kutukwa inofanira kupinda muura hwako kuti iite kuti dumbu rako rizvimbe uye kuti chidya chako chitetepe.” Mukadzi wacho anofanira kuti: “Ameni! Ameni!” 23 “‘Zvino mupristi anofanira kunyora kutuka uku mubhuku,+ okudzima+ achikuisa mumvura inovava. 24 Anofanira kuita kuti mukadzi wacho anwe mvura inovava inouyisa kutukwa,+ uye mvura inouyisa kutukwa inofanira kupinda maari sechimwe chinhu chinovava. 25 Mupristi anofanira kutora chinopiwa chezviyo+ chegodo chiri muruoko rwomukadzi wacho, ozunguzira chinopiwa chezviyo pamberi paJehovha, ouya nacho pedyo neatari. 26 Mupristi anofanira kutsamura chimwe chinopiwa chezviyo kuti chive chiyeuchidzo+ chacho uye anofanira kuita kuti chipfungaire paatari, uye pashure anofanira kuita kuti mukadzi wacho anwe mvura yacho. 27 Paanenge aita kuti anwe mvura yacho, kana iye akazvisvibisa nokuti akaitira murume wake chinhu chokusatendeka,+ mvura inouyisa kutukwa ichabva yapinda maari sechinhu chinovava, uye dumbu rake richazvimba, chidya chake chichatetepa, mukadzi wacho achava chinhu chinotukwa pakati pevanhu vokwake.+ 28 Asi kana mukadzi wacho asina kuzvisvibisa, asi akachena, ngaabve asunungurwa pachirango chakadaro;+ uye anofanira kuitiswa pamuviri nourume. 29 “‘Uyu ndiwo mutemo pamusoro pegodo,+ mukadzi paanenge atsauka+ achiri pasi pomurume wake,+ ozvisvibisa, 30 kana kuti zvimwe murume paanenge abatwa negodo, onyumwira kuti mudzimai wake haana kutendeka; anofanira kuita kuti mudzimai wake amire pamberi paJehovha, uye mupristi anofanira kumushandisira mutemo uyu wose. 31 Murume wacho achava asina mhosva yokukanganisa, asi mudzimai wacho achazvidavirira kukanganisa kwake.’”